Internet Cement Board, karusiyamu Silicate Board, Bath Mat - Fet
Internet Cement Wall Board
Karusiyamu Silicate Board
Internet Cement Floor Board
Internet Cement Exterior ukomba
Internet Cement Siding ukomba
CE / SGS Certificate Hot Sale Natural Non kutedzemuka Di ...
diatomaceous pasi kugeza bonde zvikuru absorbent munhu ...
Colored Diatomite Bath Mat Anti vapedzisire Water Abso ...
Fireproof Incombustible External Cement Board C ...
Colored Fiber Cement Cladding ukomba, Fireproo ...
Fast Kuomesa Ivhu Diatomite Bath Mat Bathroom Ma ...
Kwakachena Natural pakanaka Diatomite Bath Mat 9mm ...
9mm Diatomaceous pasi zvakasimba nokuomesa kugeza nepanhovo nakisa absorbent simba diatomite bhati bonde asiri pitikoti kugeza bonde Main Features: Diatomaceous pasi kugeza bonde izere tuduku pores uye ndima, zvakanaka absorptive kugona, deodorization, kunotadzisa chakuvhe uye mites, Anti kukweshera, nokuvhuva uchapupu , kupisa resistance.So, pano vari ayo zvakanakira zvichienzaniswa zvavo kugeza nepanhovo, * Excellent absorbent, saka unoomesa nokukurumidza * Aizogona kudzivirira chakuvhe uye mites * deodorization * No vanoda kugeza uye kutarisira zviri nyore * Non pitikoti * ...
Ningbo Fet Building Zvekushandisa & Technology Co., Ltd rakaumbwa muna 2003 muna Ningbo City, riri kumaodzanyemba Shanghai, 50km kubva Ningbo pachiteshi. Isu tiri zvikuru kwenyanzvi zvaAtemisi internet simende puranga, karusiyamu silciate bhodhi iri China ne 4 automic kugadzirwa lines.Our fekitari ndokwenguva nzvimbo 600,000 mativi metres pamwe wegore anokwanisa 20,000.000 mativi mamita. Tine matunhu rwokugadzirwa kugutsikana uye vanonzi amachinda zvesayenzi uye kugadzira zvinhu novelty.The zvigadzirwa HIV ne Intertek, SGS, TUV, PSV, redu zvebhizimisi akanga zvatenderwa ISO 9001: 2008 uye ISO14001: 2001, ari unokupai vatengi vari USA , Middle East, Australia, Africa, Europe, South Asia uye zvichingodaro. Kuwanda isu Export kutora 60% yose kugadzirwa. Pachokwadi kugamuchira zvakawanda shamwari pamwe nesu!
OUR MISORO PAMWE
Tine yakasiyana vomuzana kirasi mugadziri chikwata nokuona dzakawanda, uye akaumba akasiyana unhu uye magadzirirwo manyorerwo uye vaipa mberi pamukwidza kubva chigadzirwa design, chakuvhuvhu kukura, chigadzirwa kugadzira kune muchiso ukoshi hurongwa. Tine 4 kugadzirwa mitsetse dzakakwirira kushandisa michina pamwero uye mudonzvo dzakawanda unyanzvi members.We kunyanya dzidzira mu mukugadzira zvakawanda zvinogadzirwa zvakadai fireproof, decoration, UV zvemapuranga, chiedza internet esimende bhodhi uye diatomite kugeza mat.We kunge akawana mukurumbira wakanaka pa mudzimba uye kunze pamisika.
Ningbo Fet Building Zvekushandisa & Technology Co., Ltd rakaumbwa muna 2003. With pfungwa "kutungamirira quality, uchityaira utsanzi", kambani yedu akakumikidza kuna kupa yose vatengi tsika dzinoti zvinhu izvo kugutsa kudiwa. Uye ndakasika zvebhizimisi takunda-zvisamumirira pamwe vatengi uye kubudirira inogona kuenderera mberi. Mumakore gumi apfuura, FET simbisa kukura uye kugadzira kune zvigadzirwa chinogona kupa mushandisi kufara uye fun.With yemhando yepamusoro uye rakasiyana okugadzira zvinhu, FET nguva dzose anoramba achitungamirira chinzvimbo nyanzvi mumunda.
Ningbo Fet Building Materials & Technology Co., Ltd rakaumbwa muna 2003. With pfungwa "kutungamirira quality, uchityaira utsanzi", kambani yedu akakumikidza kuna kupa vatengi yose tsika dzinoti zvinhu izvo kugutsa vade, uye kuumbwa nevamwe muchiso unhu, akasika zvebhizimisi ndiwane zvinhu zvisamumirira pamwe vatengi uye kubudirira kutsigira development.In mumakore gumi apfuura, FET simbisa kukura uye kugadzira kune zvigadzirwa chinogona kupa mushandisi kufara uye kunakidzwa. Kubva chete chigadzirwa kune vakawanda chigadzirwa mutsetse development.With yemhando yepamusoro uye rakasiyana okugadzira zvinhu, We nguva dzose anoramba kutungamirira chinzvimbo nyanzvi mumunda.
UNOGONA TIBATEI PANO
Exterior Wall Colorful Fiber Cement Board , Exterior Wall Fiber Cement Board , Fiber Cement Board For Exterior Wall , Exterior Wall Wood Grain Fiber Cement Board ,